Dhageysi dadweyne oo ku saabsan Hindise sharciyeedka kheyraadka biyaha oo lagu qabtay Xarunta Golaha Aqalka Sare
May 07, 2018	971
Muqdisho, May 3, 2018, Guddiga Kheyraadka iyo Biyaha ee Golaha Aqalka Sare ayaa xarunta Golaha Aqalka Sare ku qabtay dhageysi dadweyne oo ku saabsan Hindise sharciyeedka kheyradka biyaha kaasi oo ay horrey u ansixiyeen Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Guddiga kheyraadka ,kaabayasha dhaqaalaha iyo Gaadiidka ee Golaha Aqalka Sare ,waxaana kasoo qeyb galay xubno ka socday dowlad Gobleedyadda dalka ,Ururada bulshada rayidka,shirkadaha biyaha iyo sharciyo yaqaanno dhanka Kheyraaka iyo biyaha ah.
Ugu horeyn kulanka waxaa furay Guddomiyaha Guddiga kheyraadka ,kaabayasha dhaqalaha iyo gaadidka ee Golaha Aqalka Sare Senator Ilyaas Cali Xassan .
Intaa kadib ayaa lasiiyay Xubnaha kas ocday dowlad goboleedyada dalka si ay aragtidoo uga dhiibtaan.
Kulankaan ku saabsan dhageysiga dadweyne ee Hinse-sharciyeedka Kheyraadka biyaha ayaa noqonaya midkii ugu horreeyay oo lagu qabto xarunta Golaha Aqalka Sare.
« Guddiga Kheyraadka ,Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Xibna katirsan Doowlad Goboleedyada Dalka Soomaaliya oo Kulan Kuyeeshay Xarunta Golaha Aqalka Sare Wafdi Kasocdo Gobalka Banaadir oo Golaha Aqalka Sare soo gaaray »
Tweets Golaha Aqalka Sare
Waxaa haatan si toos ah u socdo Xafladda Xiritaanka Kalfadhiga 6aad ee Labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Sooma… https://t.co/2XSaV3d0ig
Golaha Aqalka Sare ee BFS ayaa ansixiyay Hindise-sharciyeedka Jaangoynta iyo Tayo-dhowrka Soomaaliyeed ayada oo Lam… https://t.co/S4odsB5raE
Golaha Aqalka Sare ee BFS ayaa ansixiyey Hindise Sharciyeedka Duulista Rayidka. ayaada oo uu Golaha marsiiyey Akhr… https://t.co/k7PDKInMnG
Tweets Golaha Shacabka